ကျော်မိုးလွင် | MoeMaKa Burmese News & Media
>future PM for Thailand is Daw Yin Hla
Posts Tagged ‘ ကျော်မိုးလွင် ’
ကျော်မိုးလွင် – ပြောင်းလဲဖို့ ချိန်တန်ပြီ
ကျော်မိုးလွင် – ပြောင်းလဲဖို့ ချိန်တန်ပြီ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၄၊ ၂၀၁၅ သံသရာထဲ တဝဲလည်လည် ဒုက္ခတွေ ရှည်လျားလွန်း စိတ် မသိုးမသန့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရ သြော် …… သြော...
ကျော်မိုးလွင် – နွေဦး
ကျော်မိုးလွင် – နွေဦး (မိုးမခ) မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၅ ဟောဒါ ဥသြတွန်သံ ပိတောက်ပွင့် တဲ့ နွေ ငါ သိပ်ချစ်ရတဲ့ မြို့ ကို ထိုင်ငေး နွေရဲ့ အဇ္ဈတ္တကို...
ကျော်မိုးလွင် – ခွပ်ဒေါင်းမာန်
ကျော်မိုးလွင် – ခွပ်ဒေါင်းမာန် (မိုးမခ) မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၅ ကျောင်းသာထုအသံ ဇာတိမာန်ဖြင့် တော်လှန်သတ္တိ အပြည့်ရှိသည် အမိမြန်မာ ရတနာသား ထင်ရှားပီပီ ရှေ့သို့ချီ….. ကိုယ်ကျိုးအတွက် ငဲ့မကွက်ဘဲ ပြည်တွက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားဆောင်သည်...
ကျော်မိုးလွင် – ကဗျာ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများ
ကျော်မိုးလွင် – ကဗျာ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများ (မိုးမခ) မတ်လ ၁၊ ၂၀၁၅ အလံလွှင့်သံတွေဟာ ကဗျာ …. အလင်းသစ်တွေ ပြန်ပွင့်လာတာ ကဗျာ …. ပစ်လိုက်တဲ့ မြှားတစ်စင်း သွေးစက်စက်နဲ့ အဆိတက်ခဲ့တာ...
ကျော်မိုးလွင် – သတိ လမ်းပြင်နေသည်
ကျော်မိုးလွင် – သတိ လမ်းပြင်နေသည် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၅ ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ သန့်ရှင်းပါတယ် သမာသမတ်ရှိပါတယ် လိပ်ပြာလုံတယ်ဆိုရင် ၂၀၁၅ ကို ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့ …။ အခုတော့ အာဏာစက်ပျံ့နှံ့ရာရပ်ဝန်း စီးပွားဖြစ်သူတွေထွန်းကားလို့...